‘फेस एप ओल्ड फिल्टर’ एउटा यस्तो एप हो जुन उपयोगकर्ताको अनुहार परिवर्तन गरी बढी उमेर भएपछि कस्तो देखिने भन्ने तस्बिर सार्वजनिक गर्छ । ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो एपको एउटा क्रेज नै चलेको छ । यसको उपयोग गरी आफ्ना तस्बिर पोस्ट गर्नेहरु बढ्दै गएका छन् । यदि तपाईको ‘इन्स्टाग्राम स्टोरीज’ वा ‘ट्वीटर फीड’मा ती व्यक्तिहरुले भरिएका छन् जसले आफ्नो वर्तमान उमेर भन्दाबढी बढी र स्मार्ट देखाउन चाहेका छन्, तिनीलाई आफ्नो अनुहार देखाउन तपाईले ‘फेसएप’लाई धन्यवाद दिन सक्नु हुनेछ । यसका साथै सुरक्षा चुनौतिको सामना गर्न भने तपाई तयार हुनैपर्छ ।
सन् २०१७ मा पहिलो पटक रुसीहरुले ‘फेस एप’ सार्वजनिक गरेका थिए । त्यही एप ‘आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स(एआई)’ का साथ अहिले फेरी भाइरल भएको हो । विश्वका केही चर्चित स्टारसहितका कयौ प्रयोगकर्ताले ‘ओल्ड फिल्टर’ मार्फत यसको प्रयोग नै गरेका थिए । प्रविधि सम्बन्धि जानकारी लिने अनलाईन ‘टेकक्रन्च’ का अनुसार तपाईको तस्बिरमा फिल्टर जोड्न एपले ‘एआई’ को प्रयोग गर्छ । एपमा रहेका विभिन्न फिल्टरका लागि सेल्फी सम्पादन एउटा न्युट्रल नेटवर्कमा निर्भर रहेको हुन्छ । यसअघि ‘टेकक्रन्च’ को रिपोर्ट अनुसार पुरानो फिल्टर अब भाईरल बनेको छ । उसले लेखेको छ , ‘एपमा अन्य फिचर्स पनि छन, जस्तो की मुस्काउनु, अन्य फिल्टरका साथ युवा वा धेरै राम्रो देखाउनु । यो एप आईओएस र एन्ड्रोइड दुवैमा उपलब्ध छन् ।
प्रविधि विशेषज्ञहरुले यो ‘फेसएप’ असुरक्षित रहेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार यो एपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले ‘नो’ अर्थात् अस्वीकृत गरेपछि पनि तपाईँको डेटासम्म पहुँच कायम राख्ने क्षमता राख्छ । एपलाई प्रयोग गर्ने स्वीकृतिपछि तपाईलाई ‘स्मार्ट’ बुढेसकालको तस्बिर देखाउन फिल्टर गर्छ । यसका लागि एपले तपाईका फोटो ग्यालरी मध्ये एउटा तस्बिरलाई सम्पादन गर्छ । यो गर्नका लागि यसमा एआईको उपयोग गरिन्छ । विशेषज्ञ भन्छन्, ‘यसले तपाईको क्यामेरा रोलका सबै तस्बिरहरुमा एक्सेस प्राप्त गर्नुका साथै स्टोर गर्न सक्छ । कसैले तपाईँको कुनैपनि तस्बिरलाई आफ्नो अनुकुल बनाएर वा संशोसित गरेर गलत प्रयोग गर्न सक्छन् ।’
‘फेस एप’मा सुरक्षा चुनौतिहरु यथेस्ट रहेको ‘डेलीमेल’ ले विशेषज्ञहरुलाई उदृत गरी लेखेको छ । यो एप ‘एआई’ प्रविधिबाट चल्ने भएकाले तपाईँको फोन ग्यालरीमा भएको एउटा तस्बिरलाई दोब्बर वा तेब्बर उमेरको छविमा रुपान्तरण गर्छ । यसले तपाईको कपालको रंग, तपाईलाई दाह्रीवाल र युवा समेत देखाउन सक्छ । यो एप सुचारु भएपछि तपाईका संग्रहित सामग्री र तस्बिरहरु बिना अनुमतिकै स्टोर गर्न सक्ने क्षमता पनि यसमा छ । यसको अर्थ तपाईको डेटा असुरक्षित हुनेभयो । यति मात्रै हैन तपाईको स्वीकृति बिनैपनि डेटाहरु अरुलाई बेच्न सक्छ । यस्तोमा अवस्था पीडित भए सम्बन्धित निकायमा गुनासो गर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुहुनेछ ।
के हो फेसएप ?
फेसएप एउटा फोटो-मर्फिङ एप हो, जुन अनुहारमा परिवर्तन गर्नका लागि आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स(एआई) र तपाईका वास्तविक तस्वीरलाई परिवर्तन गर्न उपयोग गरिन्छ । यो एपले तपाईको फोटो ग्यालरीमा रहेका तस्बिरहरु उपयोग गर्न सक्छ वा तपाई एपभित्रै पनि एउटा तस्बिर खिच्न सक्नु हुनेछ । निःशुल्क सेवाले एआईको प्रयोगबाट तपाईको फोन ग्यालरीमा रहेको तस्बिर सम्पादन गरी दोब्बर वा तेब्बर उमेरको स्मार्ट व्यक्तिका रुपमा तपाईलाई प्रस्तुत गर्ने क्षमता राख्छ । यसले तपाईँको कपालको रंग पनि परिवर्तन गर्न सक्छ । तपाईँलाई यो हेर्नका लागि पनि अनुमति दिन्छ कि तपाई दाह्रीका साथ कस्तो देखिनु हुन्छ ?
२५ वर्षमै मन्त्री बने सैयद
असार १९, २०७५ एजेन्सीहरु
काठमाडौँ — मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर बिन मोहमद ९२ वर्ष पुगेका छन् । गत मेमा सम्पन्न चुनावमा महाथीरको पार्टी ‘बर्सातु मलेसिया’ ले बहुमत ल्याएपछि उनी पुन: प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
महाथीर सन् १९८१ जुलई देखि २००३ अक्टोबरसम्म गरी करिब २२ वर्ष मलेसियाको प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी मलेसियाको इतिहासमा सबैभन्दा पाका प्रधानमन्त्री हुन् ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तारका क्रममा महाथीरले २५ वर्षीय सैयद सिद्दिकलाई मन्त्री बनाएका छन् । उनी महाथीरको १३ मन्त्री र २३ राज्यमन्त्री रहेको मन्त्री मण्डलका सबैभन्दा कान्छो मन्त्री हुन् ।
मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिव रजाक सन् १९७८ मा उर्जा राज्यमन्त्री हुँदा २५ वर्षका थिए । योभन्दा अघि कम उमेरका मन्त्रीमा ३७ वर्षीय खइरी जुमालुद्दिन भएका थिए ।
सिद्दिकले मलेसियाको इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा मन्त्री भन्ने सौभाग्य भएका छन् । उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
२५ वर्षको उमरेमा मन्त्री बनेपछि सिद्दिकको चर्चा चौतर्फी चुलिएको छ । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनलाई बधाई दिनेको ओइरो लागेको छ । नेपालमा पनि सिद्दिकलाई जोडेर राजनीतिमा युवाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ भन्दै स्टाटस र ट्वीटहरु आउन थालेका छन् ।
९२ वर्षीय यी ‘पाका’ तर एक्टिभ प्रधानमन्त्री महाथीरले आफ्नो ‘नाती’ उमेरका व्यक्तिलाई आखिर किन मन्त्री बनाए ?
सैयद सिद्दिक महाथीरको पार्टी बर्सातु मलेसियाको युवा दस्ता प्रमुख पनि हुन् । उनको जन्म मलेसियाको जोहोरमा सन् १९९२ मा भएको थियो । सिद्दिकले इस्लामिक विश्विद्यालयबाट कानूनमा ग्रयाजुएट गरेका छन् ।
विद्यार्थी कालमा उनले तीन पटक एसियन ब्रिटिस पार्लामेन्टरी डिबेट च्यापियनसीप प्रतियोगितको उपाधि जितेका छन् । ओक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति छाडेर उनी राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
सिद्दिक सन् २०१६ देखि मलेसियाको राजनीतिमा चर्चामा आएका हुन् । सद्दिक र उनका सहयोगीहरले मलेसिया डेभलोपमेन्ट बरहाड प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नजिव राजकको नेतृत्वलाई विरोध गरेका थिए । १४ औँ आम चुनावमा सिद्दिक मुअरबाट ६ हजार ९ सय ५३ मत ल्याउदै विजयी भए ।
मन्त्री पदको शपथ लिंदै सिद्दिकले भविष्यमा युवाहरुलाई थप सम्भावना रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘युवाहरु भविष्यको लिडर नभएर आजकै हुन् । ’
प्रकाशित : असार १९, २०७५ १६:३८
विपद् व्यवस्थापनमा स्मार्ट-पालिका
मंगल ग्रहमा पठाइएको झन्डै दुई केजीको हेलिकप्टर
फेसबुकसँग सम्बन्ध तोड्ने भाइबरको घोषणा
हेपाटिक क्यान्सरका लागि अल्लो उपयोगी : अनुसन्धानकर्ता
कछुवा संरक्षणमा ध्यान दिन संरक्षणकर्मीहरुको जोड
अपडेटः बिहीबार, २९ साउन, २०७७ । ०५ : ५० बजे